ဟံသာဝတီယူနိုက်တက် ဘောလုံးအသင်း - ဝီကီပီးဒီးယား
၂၀၀၉; ၁၂ နှစ် အကြာက (၂၀၀၉)
မြန်မာ နေရှင်နယ် လိဂ်
ဟံသာဝတီယူနိုက်တက် ဘောလုံးအသင်းသည် တောင်ငူမြို့တွင် အခြေပြုတည်ထားသော ဘောလုံးအသင်းဖြစ်ပြီး ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးကို ကိုယ်စားပြုသည့် အသင်းဖြစ်သည်။ ၂၀၀၉ မြန်မာနေရှင်နယ်လိဂ်ဘောလုံးပြိုင်ပွဲများ စတင်ကျင်းပစဉ်ကတည်းကပင် ပါဝင်ခဲ့သော အသင်းဖြစ်ပြီး ထိုနှစ်ပြိုင်ပွဲတွင် အဆင့် ၆ နေရာတွင် ရပ်တည်ခဲ့သည်။ ၂၀၁၂ ခုနှစ်တွင် ယခင်အမည် ဥဿယူနိုက်တက်မှ ဟံသာဝတီယူနိုက်တက်သို့ ပြောင်းလဲခဲ့သည်။ ဥဿာယူနိုက်တက် အမည်နှင့်ရှိစဉ်က ၂၀၁၀ မြန်မာ့ဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ်ဖလားပြိုင်ပွဲတွင် ပထမဆုံးအကြိမ် အသင်းအတွက် အရေးကြီးသော ဖလားတစ်လုံး ရယူနိုင်ခဲ့သည်။
၅ လက်ရှိကစားသမားစာရင်း (၂၀၂၀)
ဟံသာဝတီယူနိုက်တက် ဘောလုံးအသင်းသည် မြန်မာနေရှင်နယ်လိဂ်ဖလားပြိုင်ပွဲ စတင်ကျင်းပစဉ်ကတည်းကပင် ဥဿာယူနိုက်တက် ဟူသော အမည်ဖြင့် ပါဝင်ခဲ့သော အသင်းတစ်သင်းဖြစ်သည်။ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးကို ကိုယ်စားပြုပြီး အသင်း၏ပိုင်ရှင်မှာ IBTC ကုမ္ပဏီပိုင်ရှင် ဦးအောင်မိုးကျော် ဖြစ်သည်။
ဟံသာဝတီယူနိုက်တက် အသင်းသည် မြန်မာ နေရှင်နယ် လိဂ် (၂) သို့ အဆင့်လျော့ချ ခံခဲ့ရသည်။ သို့သော် MNL-2 တွင် ဗိုလ်စွဲသောအခါ မြန်မာနေရှင်နယ်လိဂ်သို့ ပြန်လည် ဝင်ရောက်ခဲ့သည်။ ဟံသာဝတီအသင်း မြန်မာနေရှင်နယ်လိဂ် (၂) တွင်ရှိစည် ဘမ်ဘမှ ၂၄ ဂိုးသွင်းယူပေးခဲ့သည်။
မန်နေဂျာ = ဦးထွန်းထွန်းလင်း
နည်းပြ = ဦးမျိုးမင်းထွန်း
ဟံသာဝတီအသင်း၏ လက်ရှိ လူစာရင်းမှာ -  Note: Flags indicate national team as defined under FIFA eligibility rules. Players may hold more than one non-FIFA nationality.
1 GK ချစ်မိုးစက်
2 DF နန်းဝေမင်း
3 DF အောင်မျိုးသက်
4 DF သန့်ဇင်ဝင်း
5 DF အောင်မိုးထွေး
7 MF အောင်လှိုင်ဝင်း
8 FW သူရမိုး
9 MF မျိုးဇော်ဦး
10 MF ထက်လင်းလင်း
11 FW အောင်မျိုးသူရ
12 DF ညီညီအောင်-၁
13 DF ထူးနေအောင်
14 MF ရန်နိုင်အောင်
15 FW အောင်အောင်ဦး
16 DF ရွှေလှိုင်ဝင်း
17 MF Lar Din Maw Yar
18 FW ညီညီအောင်-၂
19 MF ဟိန်းထက်အောင်
20 GK ကိုကိုနိုင်
21 DF ဟန်ဝင်းအောင်
22 DF ကျော်နိုင်မြင့်
23 MF သက်အောင်
24 FW Donald Bissa
25 DF ဝေရန်မျိုး
26 MF ဘိုဘိုနိုင်
27 MF ပိုင်မိုးဝေ
29 DF John Babu
30 GK ပြည့်ဖြိုးအောင်
40 FW Francis Emeka
44 DF Kekere Moukailou
↑ Han Oo Khin (March 9–15, 2009). "New era for football". Archived 15 February 2012 at the Wayback Machine.
↑ Player List, MNL Website.
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ဟံသာဝတီယူနိုက်တက်_ဘောလုံးအသင်း&oldid=638508" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၁၆ ဇန်နဝါရီ ၂၀၂၁၊ ၀၁:၁၇ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။